Ibuyisela amahemuhemu malunga ne-Apple Watch Series 8 kunye noyilo olusicaba | Iindaba ze-iPhone
Ingelosi Gonzalez | 19/05/2022 16:28 | Apple Watch, Izaziso
I-Apple Watch iye yaba kubalulekile kubasebenzisi abaninzi kunye nokulindela kwizizukulwana ezitsha kuphezulu kakhulu. Kunyaka ophelileyo, umsi omninzi wenziwa malunga noyilo olutsha oluza kuba nalo i-Apple Watch Series 7. Kwaxelwa kwangaphambili ukuba imiphetho engqukuva yayiza kuyekwa kukhethwe uyilo oluxande ngakumbi kunye nolucaba. Ekugqibeleni kwakungekho luck kwaye kwakukho ukuqhubeka. Nangona kunjalo, Amarhe oyilo olucekethekileyo luvakala kwakhona malunga ne-Apple Watch Series 8 kwaye kunokwenzeka ukuba emva konyaka, i-Apple iya kwenza ukutsiba okulungileyo.
Uyilo olusicaba lujikeleza i-Apple Watch Series 8
Awuphuphi kodwa kubonakala ngathi a sele yabonwa Kuyo yonke imithetho. Sikhumbula into efanayo nakulo nyaka uphelileyo kodwa kusekude ukuba sihambe. Konke kwaqala ngolwazi oluvela kwi-leaker eyaziwayo uJon Prosser malunga noyilo olutsha olunokwenzeka lwe-Apple Watch Series 7. Enyanisweni, wafumana izicwangciso ze-CAD zoyilo olucingelwayo kwaye waphuhlisa uluhlu lweengcamango, kunye nephulo elikhulu leendaba, kwi uyilo olutsha oluxande kunye nesicaba olushiya iigophe zazo zonke izizukulwana ze-Apple Watch ukuza kuthi ga ngoku. Nangona kunjalo, uyilo lokugqibela lwe-Series 7 aluzange lufane neengqikelelo kwaye aluzange lususe imiphetho engqukuva.
Ngoku lithuba le Uluhlu lwe-Apple Watch 8 eya kubona ukukhanya kwiinyanga ezizayo. Amarhe akhomba Iimveliso ezintathu ezintsha kule nkcazo. Ngakolunye uhlangothi, i-Apple Watch Series 8. Ngakolunye uhlangothi, isizukulwana sesibini se-SE. Kwaye, ekugqibeleni, uhlelo olutsha lwabizwa uhlelo lomhloli, ngezinto ezomeleleyo ezijolise kwimidlalo enobungozi kunye neemeko ezigqithisileyo.
Amahemuhemu e-Apple Watch Series 8 yokuPhuculwa kokuLala iyenyuka
Iviwe ngokusuka kumthombo namhlanje ukuba kukho umboniso osicaba weglasi yangaphambili yomboniso wewotshi yeapile. Ithuba eliphezulu lokuba le yiglasi yangaphambili ye-Apple Watch Series 8.
Andizange ndive nayiphi na indlela yokwakhiwa ngokutsha kwezindlu okanye yeyiphi imodeli okwangoku.
umfanekiso womfanekiso awuyonyani kuphela. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE
— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) Ngamana 16, 2022
Umsebenzisi ShrimpApplePro owaziwayo kuTwitter ngokuvuza kwakhe i-iPhone 14 Pro, phakathi kwabanye, ukuqinisekisile oko iphaneli ye-Apple Watch Series 8 iya kuba luxande. Kwakhona uyaqinisekisa ukuba akanayo inkcazelo ephathelele inxalenye yoyilo okanye ibhokisi enjalo, ngoko akukho nto yimbi siyaziyo. Kodwa into eqinisekileyo kukuba ikristale yoxande kufuneka ifakwe kwibhokisi yoxande. Oku kunokuvuselela iflethi, uxande Apple Watch concept eyaqala, njengoko besisithi, uJon Prosser kunyaka ophelileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Amahemuhemu malunga ne-Apple Watch Series 8 ene-flat design return
Yiloo ndlela ekulula ngayo ukuvala umxholo wabantu abadala kwi-iPhone kunye ne-iPad yabantwana bakho
I-Apple isungula iBeta entsha kwaye sifikelela kwi-iOS 15.6